अनमोलको ‘क्याप्टेन’ लुक्स कस्तो लाग्यो ? « Ramailo छ
अनमोलको ‘क्याप्टेन’ लुक्स कस्तो लाग्यो ?
अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’ को फस्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा अनमोलले उडेर फुटबल हानिरहेका छन् । ‘क्याप्टेन’ अनमोलको ११ नम्बरको जर्सीमालाई पनि पोस्टरमा फोकस गरिएको छ ।
पोस्टर सार्वजनिक गरिएपनि ‘क्याप्टेन’को प्रदर्शन मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन । छिट्टै खेल सुरु हुँदैछ, पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माता भुवन केसीले क्याप्टेन लाई कात्तिक १६ गते प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
दिवाकर भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘क्याप्टेन’ मा अनमोल शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । फिल्ममा अनमोलसँगै उपासना सिंह ठकुरी, प्रियंका एमभी, सुनिल थापा, सरोज खनाल, प्रशान्त ताम्राकार, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
फिल्ममा सामिप्यराज तिमल्सेनाको कथा, अर्जुन पोखरेलको संगीत, चन्द्र पन्तको द्वन्द र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी छ । एक्सन फिल्म कृ पछि अनमोलको फुटबल खेल सम्बन्धी क्याप्टेन दर्शनमाझ आउन लागेको हो ।